Maitiro ekumisikidza zvirimo zvemukati pane iyo iPad | IPhone nhau
Maitiro ekuvhura zvirimo zvirambidzo paPad
Imwe nguva iyo diki imba inopinda nenzira nekukurumidza zvakanyanya kune zvigadzirwa zvemadhijitari. Chikamu chemhosho chiripo kuvabereki nekuyedza kufadza iye mudiki kuitira kuti vasiyane navo vega. Asi haisi mhaka yese iri kuvabereki asiwo kune vanogadzira.
Sezvo makore akati wandei apfuura Apple yakagadzira chikamu chitsva muApp Store chinonzi Vana, kwatingawana zvikumbiro zveiyo diki yeimba yakarongedzwa nezera, ivo vagadziri verudzi urwu rwekushandisa vanoita kunge vakaona denga rakavhurika uye tarisa kukudziridza maapplication echikamu ichi.
Parizvino muApp Store tinogona tsvaga vanogadzira vakaita saToca Boca, Sago Mini kana Pepi Play vanotipa mamwe maficha anonakidza kune chidiki cheimba, avo kunze kwekuvaraidza, vadzidzise. Asi chishandiso chinoshandiswa pano neapo nediki diki remba uye dzimwe nguva nevasiri vadiki kudaro. Ndipo patinofanirwa kufunga nezve mhando yezvinyorwa zvavanogona kuwana.
Sezvo vana vedu vanokura zvavanofarira uye zvavanofarira zvinochinja uye isu tinofanirwa kuyedza kuzvijairira. Iyo mitambo yawaifarira kare haisiriyo mimwe mitambo yaunoda iye zvino. Cartoon mafirimu ari kutora chigaro chekumashure, zvakafanana zvinoitika nemabhuku, terevhizheni, mapeji ewebhu
Sezvineiwo iOS inotibvumira kudzora mhando yezvinyorwa zvinogona kuratidzwa pane yedu iPad. Saka tinogona kudzikamisa kupinda kune zvimwe zvingangove zvisiri izvo zvekushandisa zvemukati mazvo mukuwedzera kudzikisira zvirimo zvinogona kuwanikwa, angave mafirimu, mabhuku, mashandiro, mapeji ewebhu ... Kuti tidzivise kupinda kune zvisina kukodzera zvemukati kubva kwedu iPad isu tine dzakasiyana sarudzo .
1 Chengetedza mapurogiramu paIpad
2 Chengetedza zvirimo paPad
3 Chengetedza zvakavanzika paPad
4 Chengetedza shanduko dzinobvumidzwa paPad
5 Chengetedza sarudzo mu Game Center
Chengetedza mapurogiramu paIpad
Mukati meZvirongwa tinotarisa sarudzo General.
Iye zvino tinokwira kumusoro Zvinodzora. Kana isu tisina kuita kuti zvishandiswe, tanga zvigadzirwa haizotikumbira kuti tigadzire password kudzivirira chero munhu kuti arege kuvamisa.
Mukati mezvirambidzo zvinoratidzwa pekutanga mashandiro ehurongwa uye mashandisiro atinogona kuvhara seSafari, Kamera, Siri, FaceTime, AirDrop, Chitoro cheTunes, Apple Music, iBooks Chitoro, Podcast uye Delete, bvisa uye utenge maapp. Kuti tivharise kushandiswa kwechero chazvo, isu tinongofanirwa kumisikidza iro bhokisi, iro nekumisikidza rinoiswa mucheka.
Chengetedza zvirimo paPad
Boka rinotevera resarudzo ratinowana rine chekuita nezviri mukati zvinogona kuratidzwa pachigadzirwa. Chekutanga pane zvese isu tinowana kupatsanurwa kunoenderana nenyika yatiri. Tevere tinowana zvinorambidzwa izvo zvatinogona kumisikidza zvichienderana nemimhanzi, mabhaisikopo, zviratidzo zveTV, mabhuku, kunyorera, Siri kana mawebhusaiti.
Kana tichida, semuenzaniso, kudzivirira mwanakomana wedu mudiki kubva kutamba Yemazuva Ano Kurwisa 5, tichaenda kuApplication uye isu ticha tarisa bhokisi rinoenderana nezera repasi yakakurudzirwa mutambo uyu. Nenzira iyi iko kunyorera hakuratidzwe paIpad kana zvirambidzo zvaitwa. Mumwe muenzaniso unowanikwa mumamuvhi, patinogona zvakare kudzora kubereka zvinoenderana nekupatsanurwa kwemamuvhi atakatangisa uye akakodzera mwana wedu.
Chengetedza zvakavanzika paPad
Iyi sarudzo inotibvumidza bvisa iwo maratidziro atakatendera kare kune akasiyana maficha atakaisa pane yedu iPad. Semuenzaniso, mukati meMifananidzo, tinowana mashandisiro atakapa mukana wekugona kuwana yedu reel chero kuchengetedza mifananidzo yatakatora kana kugovana kuburikidza nechishandiso.
Chengetedza shanduko dzinobvumidzwa paPad
Iyi sarudzo inokutendera iwe kuti udzivise ita shanduko pakushandisa nharembozha (vadzivise), yekugadzirisa kumashure uye nekuwedzera kudzivirira maakaundi emaimeri kubva pakuwedzeredzwa, kurongedzwa kana kubviswa kubva kuApp application
Chengetedza sarudzo mu Game Center
Kunyangwe iyo damn Game Center ine yayo yega inorambidzwa. Iyi menyu inotibvumidza chengetedza mitambo yekuremadza uye wedzera shamwari nyowani. Chinhu chakanakisa kugara uchiita sarudzo iyi yakadzvanywa zvakananga kubva ku Game Center sarudzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekuvhura zvirimo zvirambidzo paPad
Apple yaigona kushandisa 3.5mm jack gomba kuisa imwe mutauri